Ngaba amaSulumane avumelekile ukuba atshiswe? I-Islamic Fatwa View
Abaphengululi bamaSulumane baye baxubusha ngemibono ngotshayi, kwaye kude kube kude kungekudala akuzange kubekho i- fatwa ecacileyo, engahambelananga (imibono yomthetho) nokuba ukutshaya kuvunyelwe okanye kuvunyelwe amaSulumane
IHaram ne-Fatwa yamaSulumane
Igama elithi haram libhekisela kwimimiselo yokuziphatha kwamaSulumane. Iziganeko ezingavumelekanga eziqhelekileyo ze-haram ngokuqhelekileyo ezo zichaswe ngokucacileyo kwiimfundiso zonqulo zeQuran ne-Sunnah, kwaye zibhekwa njengeminqophiso enzulu kakhulu.
Nasiphi na isenzo esigwetyelwe i- haram sisenqatshelwe naluphi na injongo okanye injongo emva kwesenzo.
Nangona kunjalo, i-Qur'an ne-Sunnah yimixholo endala engayilindelekanga imiba yoluntu yanamhlanje. Ngaloo ndlela, ezongezelelweyo izigwebo zomthetho zama-Islam, i- fatwa , zinika indlela yokwenza izigwebo kwizenzo nezenzo ezingachazwanga ngokucacileyo okanye zikhankanywe kwiQuran naseSunnah. I-fatwa isibhengezo esisemthethweni esinikwe ngumfti (ingcali yomthetho wenkolo) ejongene nomba othile. Ngokuqhelekileyo, lo mbandela uya kuba ngowokubandakanya ubuchwepheshe obutsha kunye nentuthuko yentlalo, njengokwenza i-cloning okanye i-vitro fertilization. Abanye balinganisa i-fatwa yama-Islamic egwebayo kwisigwebo somthetho seNkundla ephakamileyo yase-US, eyenza ukuchazwa kwemithetho kwiimeko ezithile. Nangona kunjalo, amaSulumane ahlala kumazwe asentshona, i-fatwa ithathwa njengesiqulatho kwimithetho yelizwe-loo fatwa ikhethe ukuba umntu ayenze xa ephikisana nemithetho yelizwe.
Ukujonga imbono kwimiba yecigarethi kuye kwenzeka ngenxa yokuba iiguba ziyilo lwakutshanje kwaye zazingekho ngexesha lokutyhilwa kweQuran, ngekhulu lesi-7 CE. Ngoko ke, umntu akakwazi ukufumana ivesi leKuran, okanye amagama kaMprofeti uMuhammad , ngokucacileyo ukuba "ukubhema utshayi wecala akuvumelekile."
Nangona kunjalo, kukho ezininzi iziganeko apho iKuran isinika izikhokelo eziqhelekileyo kwaye ifuna ukuba sisebenzise isizathu sethu kunye nobunzulu, kwaye sifune ukhokelo oluvela ku-Allah malunga nokuchanekileyo nokungalunganga. Ngokwesiko, abaphengululi bamaSulumane basebenzisa ulwazi lwabo kunye nesigwebo ukuba benze izigwebo ezitsha zomthetho (fatwa) kwimicimbi engazange ilandelwe kwimibutho yamaSilamsi. Le ndlela inenkxaso kwiincwadi ezisemthethweni zobuSulumane. KwiQuran, u Allah uthi,
... yena [uMprofeti] ubayala okulungileyo, kwaye ubavimbela okubi; uyazivumela ukuba zivumeleke izinto ezilungileyo, kwaye zibavimbele kwizinto ezimbi ... (Quran 7: 157).
Kwiminyaka yakutshanje, njengoko izingozi zokusetyenziswa kwecuba ziye zabonakaliswa ngaphaya kokungathandabuzeki, abaphengululi bamaSulumane baye bavumelana ngokubhengezwa ukuba ukusetyenziswa kwecuba ngokucacileyo ku- haram (kunqatshelwe) kumakholwa. Ngoku basebenzisa imiqathango enamandla kakhulu yokugweba le mkhuba. Nasi umzekelo ocacileyo:
Ngenxa yokulimala okubangelwa yicuba, ukukhula, ukurhweba kunye nokutshaya iteksi kugwetywa njenge-haram (inqatshelwe). Umprofeti, uxolo lube phezu kwakhe, uxelwa ukuba uthe, 'Musa ukuzilimaza okanye abanye.' Ngaphezu koko, itekshi ayilunganga, kwaye uThixo uthi kwiQur'an ukuba uMprofeti, uxolo lube phezu kwakhe, 'ubayalela okulungileyo nokuhlambulukileyo, kwaye ubavimbela okungahambi kakuhle. (IKomidi eliPhezulu loPhando loPhando kunye neFatwa, Saudi Arabia).
Inyaniso yokuba amaSulumane amaninzi ayashunca mhlawumbi ngenxa yokuba imbono ye-fatwa isengangoko nje, kwaye akubona onke amaSulumane ayifumene njengesiko lenkcubeko.
Biography kaJohn Lasseter
Ukunyuka kweCroro Torre ePatagonia
"I-Walk to Remember" Imibuzo
Iibhola zeBhola kwiGalofu kunye nendlela abayilinganisa ngayo neBhola rhoqo
I-Pop ithwala njani i-Candy Work?
Wayengubani uMbusi uAgasto?
Umgaqo-nkqubo we-East Look
Kutheni i-Mercury iLiquid?
Indlela yokudibanisa "i-Bouger" (ukuhamba)
Jay-Z / R. UKelly: Eyona nto ibhetele kakhulu kunazo zonke
Bardo Thodol: Incwadi yeTibetan yabafileyo